Noocyo kaabash | December 2019
Waa maxay faa'iido leh iyo waxyeelo leh Kaabashka Peking
Kaabashka Beijing waxaa loo yaqaan dhammaan dadka sida saliida, cuntooyinka iyo xitaa saxamada ugu muhiimsan. Waxay noogu timid Bariga Dhexe, oo lagu qabtay miiska iyo cuntada. Qoysku waxay jecel yihiin noocyada kala duwan ee kaabajka ah ee xaqiiqda ah in loo isticmaali karo salad iyo sida kaabash caadiga ah. Ma taqaanaa? Beijing ama kaabajka shinnida waxaa iska leh qaybaha gaaban ee qoysaska kaabashka.
Kohlrabi: noocyada kaabajka
Kohlrabi waa khudradda oo lagu qiimeeyo maadada sare ee ascorbic acid. Cun cune ah, oo u eg sida dabocase leh caleemo, kaas oo koraaya dhulka oo aan la soo xiriirin carrada. Qubabku waa cagaar cagaaran ama guduud ah, wareegsan ama qaab-qaabaysan, oo ku xidhan nooca kaabajka.
Kaabashka Caleenta: liiska noocyada
Nafaqeeyayaal ayaa ammaanay cagaarka loo yaqaan "Kale Kale", noocyo kuwaas oo aad u jecel dibedda waxaana badanaa lagu magacaabaa "duurjoogta" ama "kicin", "braungol" ama "grunkol". Warshad caleen ah Brassica oleracea var. Sabellica ayaa iska leh dhirta beerta qoyska. Marka la barbardhigo sprouts Brussels iyo broccoli, wax soo saarkan ayaa ah mid aan badneyn oo ku yaal makhaayadda cuntada, laakiin sanad walba waxaa lagu helaa noocyo badan oo ka mid ah caanaha xagaaga, gaar ahaan ciribtirka barafka (illaa -15 ° C) iyo sifooyinka wanaagsan ee warshadda.
Kaabashka White: noocyada ugu wanaagsan ee sii kordhaya leh sharaxaad iyo sawir
Kaabashka White waa warshad biennial ah oo leh tiro badan oo ah nafaqooyin, vitamiin iyo xubno raad. Mid ka mid ah noocyo ka mid ah kaabajka cad ka duwan tahay kan kale ee Bisaylkiisa waqti, size ee khudradda, juiciness, cufnaanta. Marka aad dooranaysid abuurka, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaaladaha cimilada ee gobolkaaga, aagga juqraafi, tilmaamayaasha heerkulka, nooca iyo agrotechnik beerashada ciidda.
Noocyada kaabajka cas ee miiskaaga
Kaabashka gaduudku wuu ka hooseeyaa kaadida cadaanku. Inkasta oo ay faa'iido leedahay (waxa ku jira fiitamiinada iyo macdanaha ay ku badan tahay caddaan), qadhaadh gaar ah ee dhadhanka ayaa xaddiday isticmaalka. Si kastaba ha ahaatee, hadda suuqa ku jiraan noocyo badan oo kaabajka cas, ka fogaan this gaaban.
Dhammaan wax ku saabsan kaabajka caleenta
Kaabashka "gardarro" - noocyo kala duwan oo yaryar, oo leh dabiicado cimilada, dhadhan wanaagsan iyo dhalid aad u fiican. In this article waxaan ku siin doonaa sharaxaad ka mid ah dhirta this, kuu sheegi faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida, iyo sidoo kale tixgeliyaan xeerarka beeritaanka iyo daryeelka. Qeexida noocyo kaabajka ah "gardaroole" Iskujir ah "gardaroole" ayaa la soo raray 2003dii oo ah shirkad fara badan oo reer Holland ah.
Sida loo doorto miraha kaabajka: 12 talooyinka ugu fiican
Marka la beero abuurka kaabajka for geedo sii kordhaya, waxaan rajaynaynaa in goosashada mustaqbalka noqon doonaa badan iyo tayo sare, laakiin soo horjeeda dhici kara. Dhibaatadu badanaaba maaha tayada abuurka, laakiin waafaqsanaan la'aanta shuruudaha xulashada ugu muhiimsan iyadoo ku xiran xaaladaha sii kordhaya iyo dabeecadaha kala duwan. Sidaa darteed, maanta waxaan eegaynaa sida loo doorto miraha kaabajka ah si loo helo natiijada la rabay.
Dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan kaabajka sii kordhaya "Rinda"
Kaabashka cad "Rinda F1" - waa mid aad u caan ah oo maanta jira. Xaqiijinta daryeelka, iswaafajinta xaaladaha kala duwan ee cimilada, difaaca cudurada iyo cayayaanka, waxsoosaarka baaxada leh ee badeecada dhadhanka ah ayaa sameysma qudaarta qudaarta oo soo jiidasho leh oo kaliya maaha kaliya sifooyinka guryaha, laakiin sidoo kale ujeedo ganacsi.